Bishnu Sharma: ‘छड्के’ चलिरहँदा गुण्डा र ट्यापेहरू धमाधम
‘छड्के’ चलिरहँदा गुण्डा र ट्यापेहरू धमाधम
२६ फेव्रुअरी, २०१३
संयोग भनौं, फिल्म ‘छड्के’ हलमा छड्किरहँदा प्रहरीले हलबाहिर भने धमाधम मुन्द्रे र ट्यापेलाई समात्न थालेको छ । चोरी, लुटपाट र गुण्डागर्दीमा संलग्न भएको भन्दै मंगलबार ७११ जनालाई पुलिसले नियन्त्रणमा लिएको छ । फिल्म ‘छड्के’ पनि ग्याङस्टर फिल्म हो । पात्रहरू पर्दामा गुण्डागर्दी गर्र्दैगर्दा बाहिर पनि रियल गुण्डाहरू समातिन थालेका छन् । कहाँबाट कतिजना समातिए भन्ने गणितमा नजाऊँ तर बेराजगारीका बाइप्रोडक्टलाई तह लगाउने पुलिस प्रयास स्वागतयोग्य छ । झ्यापुल्ले कपाल, कानमा मुन्द्रा र गेटअप पनि दुरुस्तै गरेर तपाईं बाहिर निस्कनु भएको छ भने पुलिसबाट बच्दा हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रहरीले त्यस्तो मान्छे देख्दावित्तिकै समात्न सक्रिय भएको छ । अस्ति पोखराबाट सुरु भएको एन्टी–डन अप्रेसन थानकोटबाट राजधानी छिरेको छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी र गरिबीका प्रत्युत्पादक मात्र हुन् मुन्द्रे र ट्यापेहरू । यसको उत्तर व्यवस्थाभित्रै खोजिनुपर्छ । उत्तर खोजिएन भने भोलि उनीहरू व्यवस्थाका लागि घातक हुन्छन् । सिस्टमलाई साबुन पानी लगाएर धुनका लागि यस्तो काममा लागेको युवापुस्तालाई इन्गेजमेन्ट गराइराख्नुपर्छ । त्यस्तो इन्गेजमेन्ट रोजगारीबाट मात्र सम्भव छ । यसका लागि बाबुराम सरकारले अघि बढाएको युवा स्वरोजगार कोषलाई सक्रिय बनाइनुपर्छ । तर, यतिबेला सरकार पार्टी कार्यकर्ता र वाइसिएललाई पोस्न मात्र कोषको ढुकुटी रित्याइरहेको छ । उसै त युद्धले एउटा सिंगो पुस्ता अनुत्पादक भैरहेको बेला गुण्डागर्दी र लागुऔषधमा लागेर अपराध गरिरहेका युवा हुर्किनु समाजका लागि घातक हो । यसको तत्कालिक प्रयास राजनीतिको अपराधीकरण र अपराधको राजनीतिकरण नगर्दाबाटै थालिनुपर्छ ।
ठूला डनहरू राजनीतिक संरक्षणमै छन् । प्रत्येक पार्टीका युवा दस्ता गुण्डागर्दीमा संलग्न छन् । कतिपयलाई मन्त्रीले नै संरक्षण दिएको आरोप लागिरहन्छ । यसरी बौद्ध र बालाजुबाट गुण्डा पक्रनुमात्र भन्दा अपराधीका संरक्षकको पहिचान गर्नुपर्छ । यसको समस्या तलबाट होइन, माथिबाट खोजिनुपर्छ । समृद्ध नेपालले यस्तो युवा जेनेरेसन खोजिरहेको छैन । शिक्षा, प्रविधि, ज्ञान र संस्कारले अभ्यस्त युवा यतिबेलाको आवश्यकता हो । सरकारले पहिला संविधान निर्माण गरि युवालाई इन्गेजमेन्ट गराइराख्ने सूत्र पहिल्याउनुपर्छ । यसको मुख्य दायित्व पुँजीवादी बाटोमा अघि बढ्ने कसम खाएर माओवादीले लिनुपर्छ ।
Posted by Sharma Bishnu at 11:41 PM
रेग्मीका तीन डरलाग्दा तगारा
जसले महानायकलाई लगाम लगाउँछन्
छुरिम भन्छिन् –एभरेस्टभन्दा दुःखको हिमाल अग्लो
ओस्करको रातो गलैंचामा विश्व फेसन
यसकारण ‘अर्गो’ले जित्यो ओस्कर अवार्ड
लोमान्थाङलाई खेदेको खेदै न्युयोर्क टाइम्स
अझै ६ महिना बाबुराम प्रधानमन्त्री !
‘म काठमाडौं आइपुगेँ कमरेड’
पारस यसकारण बाँच्नुपर्छ
ब्रेकिङ न्यूज होइन, ब्रोकरिङ न्यूज
मानवअधिकार सेना कि फिल्मलाई ?
फिल्म समीक्षा : छड्के (हेरम कि नहेरम)
कोरियन गायिकाको झमेलमा बबाल कन्सर्ट
जोमसोमको मेरो हिउँ जिन्दगी !
महावीरलाई अघि सार्न बाबुराम कस्सिए
न्यूयोर्क टाइम्सको नेपालबारेको गलत न्यूज
धत ! यस्तो पनि ओस्कर अवार्ड हुन्छ ?
ओवामाकी श्रीमतीको नाम के हो ?
पपगायकले नेताहरूलाई भने –‘प्लीज इमान बचाऊ’
यस्तो हुनेछ नयाँ सरकार र खिलराजको शक्ति
सहरलाई प्रवलको नयाँ फेसन डिजाइन
हेर्नुस वर्षका चर्चित र उत्कृष्ट विश्व तस्विरहरू
अमेरिकी केटीको ‘जासुसी क्यामेरा’का यथार्थ
कोरियन पप गायिकाले नेपालमा स्कुल खोल्ने
बाबुरामलाई ग्रेस मार्क दिने कि ?
भुटानको राजधानी थिम्पु घुमघामपछि...!
हलिउड नेक्सस नेपाल
भ्यालेन्टाइन डेमा ५ हजार जागिरको घोषणा
एपी र एएफपीले यो फोटो कसरी खिचे ?
बाबुराम ट्वीटर नछोड !
खिलराज बन्दैछन् चिफ एक्जुकेटिभ, प्रधानमन्त्री होइन...
बजार चेतना बेच्दैन, आइफोन बेच्छ
भ्यालेन्टाइन डे : आधुनिकता कि सांस्कृतिक पछौटेपन
यसकारण ‘बेबेल’ले जित्यो ग्रामी अवार्ड
हेलो सरकार ! ललितपुरतिर पनि आउने कि ?
सिपोरा गुरुङ भर्सेस पदमबहादुर गुरुङ
प्रवल गुरुङलाई दश प्रश्न (टाइम म्यागजिन)
सुगमलाई सुधारगृह पठाऊ !
जाम हिँड एभरेस्ट बेस क्याम्प
विपक्षीको आन्दोलनभन्दा ‘रेस २’ बलियो
प्रचण्ड प्रस्तावका अनुत्तरित प्रश्न
हिरोको कविता (राजवल्लभ कोइराला)
पानी खिच्न अमेरिकाबाट
काठमाण्डू उल्टोबाट चौंथो सस्तो सहर
फिल्म समिक्षा : काठमाण्डू –मिरर इन द स्काई
विश्वचर्चित जादुगर निकोलस नेपालमा
एस्टेरोइड आउँदैछ पृथ्वीको नजिक
साझा बसलाई महिला ड्राइभर र खलासी चाहियो रे !
चुम्बनमा प्रतिवन्ध नलगाऊ
प्रचण्डले भनेजस्तै दशवर्षमा धनी बनौंला ?
तेस्रो विश्वयुद्ध एसियाको पानीबाट : टाइम म्यागजिन
दरबारसँग विनोद चौधरीको यस्तो टक्कर
प्रबल गुरुङका एक्सक्लुसिभ डिजाइनहरू
रगत पिउन राम्चे जाने होइन ?
प्रियंकाको गीत ‘ग्याङनाम स्टाइल’भन्दा राम्रो
अनि मनिषाले भनिन् –उत्तर तिमीभित्रै छ
‘क्याराभान’ हिरो विकास माग्दै काठमाण्डू
फेरि पनि मन्त्री र पप्पुकै जित !
ट्वीटर र फेसबुक टाइमलाइन पनि कब्जा गर्लान ?
कोही छ किन्ने ? न्यूरोडको भूतघर अझै बिकेनछ
राजेश हमाल बन्लान् स्वतन्त्र प्रधानमन्त्री ?